USexwale usezibeke emgqeni kweye-ANC | IOL Isolezwe
USexwale usezibeke emgqeni kweye-ANC
Isolezwe / 4 June 2012, 11:31am /
Mnuz Tokyo Sexwale
UNGQONGQOSHE wezeZindlu uMnuz Tokyo Sexwale (osesithombeni) ngoMgqibelo uphumele obala ngombango oshisa phansi wokuhola i-ANC exwayisa abaholi abakhona njengamanje ethi kumele bakwamukele uma amagatsha ale nhlangano ebasusa ezikhundleni engqungqutheleni ezoba eMangaung.
USexwale okulindeleke ukuthi abange noMengameli Jacob Zuma esikhundleni sokuhola i-ANC kanjalo noMnuz Kgalema Motlanthe eMangaung, ngoDisemba uqale umkhankaso wakhe wezinsuku ezimbili e-Eastern Cape ngempelasonto.
Ekhuluma kwenye yama rally uSexwale ugxeke abaholi bezepolitiki abacabanga ukuthi bangabaholi bendabuko ngokuthi balindele ukuthi bazohlala kulezi zikhundla kuze kube ngunaphakade.
Nakuba ukuhambela kukaSexwale e-Eastern Cape bekuyingxenye yomsebenzi wakhe njengoNgqongqoshe kodwa ezinkulumeni zakhe nezingoma abezicula kucacele noma ngubani ukuthi uyakhankasa.
Umkhankaso wakhe uthole ukwesekwa ngesikhathi amanye amakhosi abaThembu ethi kade ayefuna ukuthi kube nguye ohola i-ANC.
Ekhuluma kwenye i-rally eMthatha uSwexwale uthe abaholi abakhethwa ePolokwane ngo-2007 kumele bazi ukuthi abanalo ilungelo elimile lokuthi bangaphinde babuyiselwe ezikhundleni. “Sakhethwa ePolokwane kodwa manje iyeza iMangaung, lapho isigungu esiphezulu siyoqeda umsebenzi esawukhethelwa ePolokwane,” kusho uSexwale.